တစ်မိုးစအောင်ဘယ်လိုနေသလဲ? မိမိတို့လက်နှင့်အတူခရစ္စမတ်ပန်းကုံး ခရစ္စမတ်စက္ကူကစားစရာ ပုတီး၏ခရစ္စမတ်လက်ဆောင်များ အဆိုပါတစ်မျိုးကတော့နေတဲ့ခရစ္စမတ်သစ်ပင်ကိုအောင်ဘယ်လိုနေသလဲ?
လာမည့်နှစ်သစ်ကူးအဘို့ပြင်ဆင်နေ - ကဖွင့် installation နဲ့အလှဆင်ခရစ္စမတ်သစ်ပင်, ဒါပေမယ့်လည်းတိုက်ခန်းရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလ၏ဖန်ဆင်းခြင်း, Pre-အားလပ်ရက်လေထုမဟုတ်ပါဘူး။ သင့်ကိုယ်ပိုင်နေအိမ်အလှဆင်ဖို့, သင် tinsel, ပန်းကုံး, မိုးရွာရွာ, ထင်းရှူး-တစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်, တစ်မျိုးကတော့, ဖန်နှင့်ပလပ်စတစ်ဘောလုံး, အတုသို့မဟုတ်သဘာဝကလွမ်းသူ့ပန်းခွေ, ခေါင်းလောင်း, မိုးစများနှင့်ပုံစံမျိုး၏အခြားဒြပ်စင်ကိုသုံးနိုင်သည်။ ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုအလှတရားသငျသညျ, အထူးသဖြင့်အများအပြားတာဝန်များကိုတပ်ဖွဲ့များကတည်းကသူတို့လက်နှင့်အတူ "ဆောငျးရာသီ" စိတ်ဓါတ်များအောင်ပင်ကလေးများဆက်ဆက်တစ် store မှာမဝယ်ပေမယ့်ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့နိုင်ပါတယ်။
အိမ်တော်အဘို့ခရစ္စမတ်အလှဆင်ဆေးသုတ်နှင့်အတူရောင်စုံသို့မဟုတ်အခြားနည်းလမ်းဖြင့်အလှဆင်, အဖြူရောင်သို့မဟုတ်အရောင်စက္ကူကနေဖန်ဆင်းတော်, ပြီးတော့ sequins နှင့်အတူအလှဆင်နိုင်ပါတယ်။ ဒီပစ္စည်းကိုဖန်ဆင်းလူကြိုက်အများဆုံးခရစ္စမတ်အလှဆင် - မိုးစ ။ သူတို့က, လွင်ပြင်စက္ကူသို့မဟုတ်စမတ်ထုပ်ပိုးခြင်းမှ, တောက်ပခြင်းနှင့်လျှံအဖြူရောင်သို့မဟုတ်အရောင်, ကြီးမားတဲ့သို့မဟုတ်သေးငယ်စေနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါအချိန်ပိုမိုသင် workpiece ဝတ်နှင့်ပိုမိုပါးလွှာပုံစံကိုသင်၏မိုးစရရှိရန်ပိုမိုမူရင်းနှင့်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်။ စကားမစပ်ပြတင်းပေါက်၏ခရစ္စမတ်အလှဆင်တဲ့ရေဖန်ခွက်ဖို့ workpiece ပူးတွဲပြီးတော့အဖြူရောင်ဆေးသုတ်သို့မဟုတ်ရောလျက်သွားတိုက်ဆေးနှင့်အတူအထက်မှမှာသုတျဖို့သွားပွတ်တံကိုသုံးပါရန်လုံလောက်သော, မိုးစအားဖွငျ့လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ သင့်ရဲ့ဖန်ခွက်ပေါ်တွင်အလွတ်ကွာပြီးနောက်သင်တစ်ဦးကိုမှန်ကန်ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလပုံစံရ။
စက္ကူလျှက်ရှိကြောင်းနိုင်ပါသည် ရောင်စုံပန်းကုံးကွင်းဆက် သားသမီးများ၏အလုပ်အကိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့။ အရောင်စက္ကူယခင်ကတန်းတူအရှည်နှင့်အကျယ်၏ဖြာ, ပြီးတော့ကော်နှင့်အတူကွင်းသို့ချွတ်ချိတ်ဆက်ဆိုအရှည်တစ်ကွင်းဆက်ဖန်တီးပါ။ အထူစက္ကူလက်ဆောင်တွေအဘို့သင့်ကိုယ်လက်ဖြင့်လုပ်သောနှုတ်ခွန်းဆက်ကတ်များ, ဒါမှမဟုတ်မူရင်းသေတ္တာများအတွက်အခြေခံဖွဲ့စည်းပါလိမ့်မယ်။ များထုတ်လုပ်ဘို့ စက္ကူနဲ့လုပ်ထားတဲ့လက်ဝတ်ရတနာ , သင်ကတ်ကြေးကိုသာတစ်စုံ, ကော်အနည်းငယ်စိတ်ကူးစိတ်သန်းများနှင့်ထိုကဲ့သို့သောရောင်စုံချည်, ခလုတ်, sequins, crystals နှင့်အခြားသူများအဖြစ်အလှဆင်ဒြပ်စင်ထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။
ကောက်ခံ Spruce သို့မဟုတ်ထင်းရှူးတစ်မျိုးကတော့အနုပညာနှစ်သစ်ကူးရဲ့ပုံစံမျိုး၏အကျင့်ဖြစ်လာဖို့အနည်းငယ်အပြောင်းအလဲနဲ့နောက်မှာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဆားတစ်ပူပြည့်နှက်ဖြေရှင်းချက်တစ်စိမ်းချိန်ထားခြင်းကြောင့်မြို့သား6နာရီစိမ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ထို့နောက်ကန်တော့ချွန်ဖယ်ရှားကြောင့်ခန်းခြောက်, ရလဒ်နှင်းခဲပုံနဲ့တူတဲ့အဖြူရောင်အပေါ်ယံပိုင်းတစ်မျိုးဖြစ်လိမ့်မည်။ အဆိုပါတစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်ကနေခရစ္စမတ်အလှဆင်ထိုကဲ့သို့သောတစ်မျိုးကတော့အတူအလှဆင်နိုင်ပါတယ်, အနည်းငယ်တောက်ပနေသို့မဟုတ်မိုဃ်းကိုရွာစေချည်ဖြည့်စွက်, ဒါ Spruce ယက်အတော်လေးပုံမှန်မဟုတ်သောဖြစ်လာစေရန်နှင့်နှစ်သစ်ကူး။ ထို့ပြင်သင်တို့သည်အခက်များနှင့်တစ်မျိုးကတော့အပေါ်ကိုအနည်းငယ်ကော်လျှောက်ထား, အဲဒီနောက်ရယူထားသောရာအရပျခြစ်မြှုပ်ဖြန်းများနှင့်သင့်ထင်းရူးအကိုင်းအခက်ပေါ်မှာအစစ်အမှန်နှင်းကျမယ့်နိုင်ပါတယ်။
Spruce "နှင်းဖုံး" တစ်မျိုးကတော့, ဖယောင်းတိုင်များနှင့်ခရစ်စမတ်ကစားစရာ၏အကိုင်းအခက်, သင်တိုက်ခန်းများ၏အလှဆင်အတွက်၎င်း၏နေရာယူလတံ့သောအဆင်းလှပန်းပွင့်အစီအစဉ်များဖန်တီးနိုင်ပြီး, အပြင်, ဗဟိုကတဦးတည်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုဖယောင်းတိုင်ထားရန်ဖြစ်နိုင်သည်။
ထိုအခါတစ်မျိုးကတော့နေတဲ့ခရစ္စမတ်သစ်ပင်ကိုလုပ်ဖို့ဘယ်လို, သင်ကဖတ်နိုင် မာစတာအတန်းအစား ။
ဒီနည်းပညာပုတီးနှင့်စိတ်ကူးယဉ်၏ရှေ့မှောက်တွင်အတူလုပ်ကိုင်၏အခြေခံနည်းစနစ်အချို့ကိုကျွမ်းကျင်မှု, အသိပညာလိုအပ်သည်။ ဝါယာကြိုးသို့မဟုတ်ငါးဖမ်းလိုင်းအသုံးပြုခြင်းယက်နိုင်ပါတယ် beaded မူရင်းမိုးစ ခရစ္စမတ်သစ်ပင်သို့မဟုတ်ပန်းကုံးပေါ်ခရစ္စမတ်အလှဆင်။ စီစဉ်ထားတဲ့စီမံကိန်းကိုပေါ် မူတည်. အဆိုပါပန်းကုံးဘို့အဖြစ်အတော်လေးနည်းနည်းများအတွက်ပုတီးနှင့်မိုးစတွေအများကြီးယူလိမ့်မယ်, လိုအပ်သောပစ္စည်းများကိုတက်စတော့ရှယ်ယာမှရပါလိမ့်မယ်။ ပုတီးပန်းကုံးမိုးစများနှင့်ကလေးကစားစရာအဘို့, ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်များ၏ကြီးမားသောနှင့်အသေးစားပုတီးပြောင်း, တစ်ဦးချည်ပေါ်ကောက်ယူနိုင်ပါသည်လိုချင်သောပုံသဏ္ဍာန်ကိုဆုံးရှုံးဖို့ထုတ်ကုန်များ၏လိုအပ်သောကျောမှုပေးနဲ့မဟုတ်ဘူးသောပါးလွှာသောဝါယာကြိုးသို့မဟုတ်ငါးဖမ်းလိုင်းသုံးစွဲဖို့ သာ. ကောင်း၏။
မေလ 1 ပွဲခံချိန်
အဘယ်အရာကို3နှစ်အဘို့အသင့်ကလေးကိုပေးသလော
ဖေဖော်ဝါရီလ 23 အကြိုက်ဆုံးအဘို့လက်ဆောင်ကိုပို့ပါ
အမျိုးသမီးတစ်ဦးမှလက်ဆောင်ပေးမယ် 55 နှစ်တာ
မီးဖို၌ roasting အဘို့အမဲသားကိုစိမ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
အချိန်သည်ဆောင်းကာလ၌ Plum - 11 ကိုမူလအသီးရိတ်သိမ်းစိတ်ကူးများ
အဆိုပါအရောင်များ, မြင်း 2014
ဘီလီယံဒေါ်လာလျော့ချမယ် - အန္တရာယ်နှင့်အကျိုးအမြတ်
ဘီယာ Battery ကိုအတွက်အတောင်ပံ